Akwụkwọ na Sankt Martin Mpempe akwụkwọ na ederede site na akwụkwọ ntụrụndụ maka akwụkwọ obibi
Abụọ Martin Martin - ederede na ederede
Abụọ Martin Martin - ederede
Ememme nleta nke St. Martin ga-aga na 11. Emere ememe na November ma gbanwee nke ọma n'ọtụtụ mpaghara. Ka o sina dị, akụkọ banyere St. Martin na ọrụ a ma ama - na - eketa uwe - dị n'ebe nile.
Mpempe akwụkwọ na ederede Sankt Martin Lied
Maka umuaka, nzuko nke St. Martin bu ihe mere ememe maka ihe di iche iche. A na-emegharị ebe a n'ọtụtụ mba Europe, ọ bụ ezie na obere nkọwa nwere ike ịdị iche na mpaghara. Otú ọ dị, ha nile nwere ihe jikọrọ ya, ihe ndị ahụ na-eji ọkụ ma ọ bụ ọkụ na-aga ebe obibi. A na-azụ ma ọ bụ na-agbanye mmanụ eletrik site na ụlọ akwụkwọ ọta akara na ụmụaka ụlọ akwụkwọ.
N'ime usoro a, ndị mmadụ na-esonyere na St. Martin. Ndị na-agụ egwú na-abụ abụ Martinslieder na ndị agbụrụ.
Ịpị na mbido ahụ ga-emepee ibe agba na ntinye na ederede na pdf usoro
Mpempe akwụkwọ na ederede Sankt Martin
na-agbada site na snow na ifufe,
ịnyịnya ya buru ya ọsọ ọsọ.
Saint Martin ji obi ike gbagote
uwe ya na-ekpuchi ya ọkụ na nke ọma Ịnọ ọdụ na snow, nọ na snow,
otu nwoke dara ogbenye nọ na snow,
enweghị uwe, na-akwa ákwà.
Oh na enyere m aka na nsogbu m,
ma ọ bụghị ihe ọjọọ na-egbu mgbu bụ ọnwụ m.
Saint Martin weghaara ihe ndị ahụ,
ịnyịnya ya guzoro n'akụkụ nwoke ahụ dara ogbenye,
Saint Martin na mma agha
akwa ahụ na-ekpo ọkụ.
Saint Martin nyere ọkara,
onye na-arịọ arịrịọ na-ekele ya ngwa ngwa.
Ma Saint Martin ji ọsọ ọsọ
wepụ uwe ya.
Saint Martin weghachite ya
Ná nrọ a, Onyenwe anyị banyere.
Ọ na-eyi uwe ahụ dị ka uwe
ihu ya shines loveliness.Sankt Martin, Saint Martin,
Saint Martin na-ele ya anya dị ịtụnanya
Jehova na-egosi ya ụzọ.
Ọ na-ewebata ya na chọọchị ya,
Martin chọrọ ka ọ bụrụ onye na-eso ụzọ ya.
Saint Martin ghọrọ onye nchụàjà
ma jee ozi n '] chŽch] nke Chineke,
nke ahụ nwere ike chọọ ya n'ili,
N'ikpeazụ, ọ na-ebu onye ozuzo ahụ.
Saint Martin, oh onye nke Chineke,
Ugbu a, nụrụ arịrịọ anyị
Kpee ekpere maka anyị n'oge a
ma na-eduga anyị n'ịgọzi.
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nke abụ Sankt Martin dị ka faịlụ dị egwu
Sankt Martin Fest - omenala ma ka dị ugbu a
St. Martin - Saint Martin | Na-eme ememe
Mee ka ikwiikwii mee onwe gị Saint Martin
Coloring page Saint Martin Lanterns Na-agagharị
Coloring peeji nke Saint Martin / Martinstag
Coloring peeji nke Saint Martin
Foto na-agba agba St. Martin
Mgbanwe St Martin
Gosi ụkwụ gị - ederede na ederede
Ezi mgbede, ezigbo abalị - ederede na ederede
Ị maara kpakpando ole na ole - ederede na ederede